Earn Igbo - Digital Cosmos
Nabata na Digital Cosmos Mgbakwunye ohere. Ugbu a, ị nwere ike nweta ego na ịgagharị na ohere Digital Marketing dị n’akụkụ ụwa niile.
Kwesighi ichere iji mụta Digital Marketing. Chọghị imefu ego na oge maka nke ahụ. Kedu? Dị mfe dịka nke ahụ, anyị emeela ihe niile maka gị, anyị etinyela oge, ego na ume iji wee mara ihe Digital Marketing site n’akụkụ niile. Lelee asambodo nke nna m V S PRASAD na nwa nwanyị SRUTHI, anyị na-akpọ onwe anyị DaFa na DaFa.Rocks bụ weebụsaịtị anyị.
Yabụ Ihe ịchọrọ iji nweta uru a n’inye akụkụ niile nke Digital Marketing dị ka, Webdesign (Weebụsaịtị WordPress), phdị eserese, Marketingzụ ahịa, SEO, Social Media Marketing, Email Email, Marketing ọdịnaya, Mgbasa ozi n’ịntanetị dị ka PPC google ads, mgbasa ozi facebook. , mgbasa ozi youtube, mgbasa ozi instagram wdg, njikarịcha na nnwale, Nwupụta nke Fun Fun Sales, Nchịkwa na specializaiton data na ecommerce. ngwa ahia dị ka nyocha, azụ n’azu, vidiyo mmekọrịta na wdg,,
Ihe ndị a dị n’elu bụ ụdị ohere ole na ole ị ga-enye maka obere azụmaahịa n’ime na gburugburu agbataobi gị ma ọ bụ na gburugburu ezinaụlọ na ndị enyi ma ọ bụ site na ịkekọrịta njikọ njikọta akpaaka ndị dị ịtụnanya ịkekọrịta na mgbasa ozi mmekọrịta nke facebook, whatsapp, youtube instagram wdg. peeji a kara aka emebere nke ọma maka ndị mmekọ dị njọ. Iji bido, ị ga – enweta ngụkọta nke 20% uru niile anyị na – enweta site na iwu ndị ahụ nke ibugharị gị, na mmadụ ma ọ bụ site na njikọta akpaaka akpaaka gị na ebe ọ bụla na ntanetị gafee ụwa. Maka ndị na-eme nke ọma, anyị hụrụ ndị ọzọ n’anya ịkekọrịta, nke nwere ike ịdị iche site na ikpe ruo na nke ọzọ.
Kpọọ _917760636363 na whatsapp site na ebe ọ bụla n’ụwa n’oge ọ bụla. Ndị otu anyị raara onwe ha nye ga-amụrụ anya iji nyere gị aka n’okwu ọ bụla. Can nwere ike ịkparịta ụka na ibe Tawk.to/join gị oge ọ bụla site na ebe ọ bụla.
Naanị debanye aha n’okpuru wee soro ntuziaka ndị a. maka ajụjụ ọ bụla kpọtụrụ [email protected]